★မြန်မာ့အလင်း★: နအဖမတရားဘူး.. ဒီမိုတွေ မတရားဘူး ဆိုတာ မဟုတ်ပါ
အခုဗီဒီယိုလေးကို ကျနော်တို့ အရမ်း သဘောကျမိတယ်။ လူမျိုး၊ဘာသာမခွဲခြားပဲ တန်းတူထားတဲ့ မေတ္တာကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဈေးရောင်းတဲ့သူက Hijab ၀တ်ထားတဲ့ မိန်းမကို မွတ်ဆလင်မိုလို့ ဈေးမရောင်းနိုင်ဘူးဆိုပြီး ပြစ်ပြစ်ခါခါ ပြောတဲ့အခါမှာ ဘေးကလူတွေ ဘယ်လို တုံ့ပြန်မလဲ မြင်နိုင်ပါတယ်။ လူတချို့က အဲလိုလုပ်တာကို ထောက်ခံအားပေးတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ အမေရိကန်တွေဟာ မွတ်ဆလင်မဘက်ကနေ ကူညီပြီး သူတို့အဖြူကို ပြန်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။ မင်းဟာငါတို့နဲ့ လူမျိုးနဲ့ ဘာသာခြင်းတူပေမယ့် မတရားတာလုပ်ရင် မင်းဘက်က မပါနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ထားဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်လေးစားထိုက်တဲ့ သူတွေလဲဗျာ? ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ ခေါ်ရမှာပေါ့ဗျာ။ (ဒီအချက်နဲ့တင် အဖြူအားလုံးကို မျက်ကန်းအထင်မကြီးနဲ့ဦး) အဲလို လူမျိုးကို ကျနော်တို့ ၂ ယောက် အရမ်းလေးစားမိတယ်။ အထူးသဖြင့် ငါနဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုပြီး ငြိမ်နေလို့ရတာပဲ။ ဒါပေမယ့် တရားမျှတမှုအတွက် ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။
မွတ်ဆလင်တွေ. . .အခုဗီဒီယိုကြည့်ပြီး ဘယ်လိုခံစားရလဲ? မင်းတို့ဘက်ကနေ မျှတစွာကူညီပေးတဲ့ အဖြူတွေကို လေးစားမိတယ် မဟုတ်ပါလား? အေး.. အဲဒါ သာမန်လူတွေမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်ပဲ။ လူဆိုတာ စာနာစိတ်ထားတတ်ရတယ်။ မင်းတို့ ဘာသာမှာ ကိုယ်ချင်းစာနာဖို့ သင်ပေးတာမရှိတော့ ဘယ်သိမလဲ။ ဒီတော့ ငါတို့ပြောပြမယ် . . . မင်းတို့လိုပဲ တခြားဘာသာဝင်တွေမှာ ခံစားချက်ဆိုတာရှိတယ်။ မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့သူတွေကို သတ်ဖို့ သင်ကြားချက်အပေါ်မှာ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ စဉ်းစားကြည့်။ တခြားဘာသာဝင် မိန်းခလေးတွေကို ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ ကုလားကို ပလီကဆုငွေပေးတဲ့ ကိစ္စ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ စဉ်းစား။ မင်းတို့တွေ လူလို စဉ်းစားတတ်ရင် လူစိတ်ကင်းမဲ့အောင် သင်ကြားပေးတဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာကနေ ထွက်ခွာပါ။ ကိုယ့်ချွေးမကို တဏှာရူးတဲ့ မိုဟာမက်၊ သူများ မိန်းမတွေကို မိုဒိမ်းကျင့်တဲ့ မိုဟာမက်၊ လူတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်တဲ့ မိုဟာမက်။ တခြားဘာသာတွေကို စော်ကားတဲ့မိုဟာမက်။ လုံးဝ အဆင့်မရှိတဲ့ မိုဟာမက်ကို မင်းတို့ ဘာအတွက် ကိုးကွယ်နေလဲ? ငါတို့မိုဟာမက်အကြောင်း အမှန်အတိုင်းပြောတာ မင်းတို့ကို ဆော်ကားတာ မဟုတ်ဘူး။ တကယ်လို့ ငါတို့ ပြောဆိုချက်ဟာ ဆော်ကားတယ်လို့ သတ်မှတ်ရင် ဘယ်အချက်လဲ ထောက်ပြပါ။ ငါတို့က ကျမ်းစာအထောက်အထားမရှိပဲ ပြောဆိုတာဆိုရင် လူပုံအလယ်မှာ တောင်းပန်ပေးမယ်။ တကယ်လို့ ငါတို့ပြောတာမှန်ရင် မင်းတို့ မွတ်ဆလင်အဖြစ်ကနေ ထွက်ပေးပါ။ ဘယ်လိုလဲ? စိန်ခေါ်ရဲလား?
မွတ်ဆလင်ဝါဒကို ဘာကြောင့် အမြစ်ဖြုတ်နေလဲ ထပ်ရှင်းချင်တယ်။ မွတ်ဆလင်ဝါဒဟာ အင်မတန်ကို ယုတ်ညံ့လွန်းလို့ အမြစ်ဖြုတ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်မဟုတ်ရင် သတ်ပြစ်ရမယ်လို့ သင်ကြားတားတယ်။ မွတ်ဆလင်ကနေ ထွက်ရင် သတ်ပြစ်ရမယ်တဲ့။ မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့ မိန်းမတွေကို မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ အားပေးတယ်။ သမီးအရင်းကို လိင်ဆက်ဆံရင် အပြစ်မရှိဘူးဆိုပဲ။ အဲလို လူမဆန်အောင် သင်ကြားပေးတဲ့ ဘာသာကို တိုက်ဖျက်တဲ့ ကျနော်တို့က မှားသလား? (ကျနော်တို့ဟာ ကုလားတွေကို လူမျိုးရေး မနှိပ်ကွက်ခိုင်းပါဘူး။ အကြမ်းမဖက်ခိုင်းပါဘူး။) အဲဒီဝါဒဆိုးကြီးရှင်သန်ခွင့်ပေးတဲ့ ခင်ဗျားတို့ ရပ်တည်ချက် မှန်ကန်သလား? ဒါမှမဟုတ် အဲဒီယုတ်ညံ့တဲ့ဝါဒကို ကိုးကွယ်နေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေက မှန်သလား? စဉ်းစားပေါ့ဗျာ
အထက်ကဗီဒီယိုကိစ္စကို ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင် မြန်မာလူမျိုးတွေက ကိုယ့်ရှေ့မှာ မတရားမှုလုပ်နေရင် မသိဟန်ဆောင်ကြပါတယ်။ ငါပါအရှုပ်ထဲ ပတ်သက်နေဦးမယ်ဆိုပြီး တဖက်ကို လှည့်နေတတ်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ နိုင်ငံမှာ မတရားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စ နအဖကို အပြစ်တင်သင့်လား? ဒီမိုသမားတွေကို အပြစ်သင့်လား? အဲဒီလူတွေကို ကျုပ်တို့လူ့ဘောင်က မွေးထုတ်ထားတာပဲ မဟုတ်ပါလား? ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် မတရားမှုတွေကို လက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့ မြန်မာ့လူ့ဘောင်ကြီးဟာ အဓိကလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ တာဝန်မဲ့တဲ့ မြန်မာ့လူ့ဘောင်ကြီးကိုပဲ အပြစ်တင်သင့်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အခုဆောင်းပါးဖတ်နေတဲ့ ခင်ဗျားကို အပြစ်ရှိတယ်လို့ ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်ချင်ရင် မြန်မာ့လူ့ဘောင်ကြီးကို ပြုပြင်မှ ဖြစ်မယ်။ လူ့ဘောင်ကို ပြုပြင်မယ်ဆိုပြီး တခြားလူတွေကို ဆရာလိုက်မလုပ်ပါနဲ့။ မိမိကိုယ်တိုင်က အများအကျိုးအတွက် တာဝန်ကျေတဲ့ လူဖြစ်ဖို့နဲ့ မတရားမှုတွေ မြင်တွေ့နေရင် လက်ပိုက်မကြည့်ပဲ မှန်ကန်တဲ့ဘက်က ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရပ်တည်တဲ့ စိတ်ကို မွေးပါ။ ခင်ဗျားလိုစိတ်ထားရှိတဲ့သူတွေ ရှိလာပြီဆိုရင် လူ့ဘောင်ထဲမှာ မတရားမှုတွေ ပပြောက်ပြီး တိုးတက် စည်ပင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 7:50 AM